GREENHOUSE FOR GEEDO: NOOCYADA IYO HABABKA ISTICMAALKA - DHISMAYAASHA
Bannaanka u khibrad leh ogaa in geedo koray on waddada ka xoog badan yihiin dhirta indoor. Bilowgii maalmaha ugu horeeya ee diiran, waxay ufiican tahay inay soo saarto geedo ka mid ah dalagyada khudradda laga bilaabo dhismaha si ay u noqoto mid daadsan oo caadaysto hawada furan.
Si loo ilaaliyo muddadan, waxaa lagu isticmaalaa koriyo qaas ah iyo garaafyo yar-yar.
Shuruudaha geedo beerto
Waqtiga beerashada hoyga ku-meel-gaarka ah waxay ku xiran tahay heerkulka hawada. Sida caadiga ah waa la aqbali karaa dhammaadka april. Xakamaynta heerkulka habeenkii waa in la bilaabo Maarso. Waxaa lagama maarmaan ah in la jebiyo koriyo oo bilaabo in ay diiriso ciidda ku jirta si ay u beerto marka heerkulka celceliska habeenkii uu gaaro 8 digrii, halka maalinta oo dhan aysan ka hooseynin 15.
Diyaargarowga hore ayaa la sameyn karaa "sariirta diiran" ee qaab barkad oo digada ah iyo compost hoos carrada. Kulaylka noocan oo kale ah wuxuu kor u qaadi doonaa heerkulka hoostiisa oo ka caawiya dhirta inay ka ilaaliyaan dhaxan habeenkii.
Sidoo kale, marxaladaha hore, waxaad bilaabi kartaa adigoo isticmaalaya aqalka dhirta lagu koriyo marka la beero dalagyo qabow badan oo qabow, sida kaabajka, gudaha.
Iyada oo la beero dalagyada kulaylka-jecel (basbaaska, yaanyada, qajaarka), waa in aadan degdegin.
Ugu horeyn, hubso in heerkulka uusan ku dhicin wax ka hooseeya 10 digrii habeenkii, haddii kale dhirtaadu waxay bilaabi doonaan xanuunka waxayna gaabin doonaan koritaankooda.
Markaad soo jiido, tixgelin suurtogalnimada inaad soo celiso dhaxan iyo diyaariso hoy dheeraad ah. Doorka waxaa lagu sameyn karaa lakab kale oo filim ama maqaarka daboolka ah, iyo sidoo kale buste hore ama buste, kaas oo aqalka dhirta lagu koriyo waa in la daboolo habeenkii.
Iyada oo ku xiran meesha dhismayaasha geedo sii kordhaya, waxay u qaybsan yihiin laba nooc:
1. Guryo yar yar
Isticmaal gudaha (gudaha aqalka ama balakoonka). Ujeedada isticmaalka - xaaladaha aqalka dhirta for abuur biqilka.
Saldhigga jilitaankooda waa dherer yar oo ku daboolan dhalada. Shaqada daboolka ayaa ah in la isku ururiyo oo lagu hayo kuleylka biqilka. Jeexista xaaladahan oo kale ayaa si weyn u kordheysa.
Si aad u kaydiso meel bannaan sanduuqyada, nooc shixan ah ayaa la bixiyaa. Intaa waxaa dheer, naqshaddan waxaa lagu daboolay fur furan oo filim ah. Qaab dhismeedka noocan oo kale leh sanduuqyo heerkul fiican ku haboon in lagu qabto balakoonka la daboolay ama guntgiashalkaasoo ay jiri doonaan iftiin ku filan geedo, mana u kala bixin doono sida haddii lagu hayo guri dabaq ah.
Tani waa isku aqalka dhirta lagu koriyo, oo loo isticmaalo khudradda sii kordhaysa, laakiin waxay ka duwan tahay midda yar. Waxaa jira dhowr qaab-dhismeedyada-yar-yar-yar. Xaaladda guud waayo qaab-dhismeedkooda - abuurista xaalado wanaagsan oo loogu talagalay khudaarta. Under hoyga waa in ay ahaato heerkulka iyo qoyaanka ku habboon, iyo sidoo kale ciidda iftiin iyo nafaqo leh.
Guryo-geedo loogu talagalay geedo beerta beedka ah waa noocyo kala duwan.
Hooska ugu fududi waa arc. Shirkadoodu waxay ka sameysan yihiin dhuumo caag ah ama bir ah. Dabool khariidadooda filim caag ah, maadaama ay si fiican u hayso kuleylka iyo u ogolaato ciidda in ay si degdeg ah u diiriso qashinka.
Sida ikhtiyaari, waxaad isticmaali kartaa aqalka dhirta lagu koriyo oo ku saleysan sanduuq alwaax ah, oo ku daboolan daaqada hore ee daaqada ama qaab-hoosaadyo daboolay filim. Si aad u heshid nalalka wanaagsan ee naqshadeynta, derbiga danbe waxaa laga dhigaa mid ka sarreeya dhinaca hore.
Dhererka aqalka dhirta lagu koriyo ee geedo waa inay noqotaa yar yar, waayo ilaalinta fiican ee kuleylka ku jira.
Maxaa la wareegayaa?
Ujeedada isticmaalka hoyga wadooyinka ama balconyka geedo waa geeddisocodkoodu waafaqsan shuruudaha beeraha sii kordhaya. Haddii dhirta laga soo saaro waddada oo isla markiiba loo wareejiyo dhul furan, waxaa jira khatarta dhimashadooda. Geedo noocan oo kale ah waa kuwo daciif ah, oo aan loo isticmaalin qorraxda qoraxda.
Beeridda cagaaran ee geedo ayaa billaabanaya bisha Febraayo xaaladaha degaanka ee daaqadaha daaqada, ka dibna dhirta ayaa ku quusaya gooynta yaryar oo ku yaalla loggias iyo mini-lagu koriyo geedo.
Waqtiga beerashada iyo u wareejinta lagu koriyo dhaqamada waxay u qaybsan yihiin:
Hore - celery, basbaas, eggplant, aan tayo lahayn, caleenta. Laga soo bilaabo dabayaaqadii February ilaa bartamihii March.
Celcelis ahaan - qajaar, zucchini, bocorka. Muddada abuurista waa bilowga Abriil.
Late - kaabajka, cagaarka. Geedaha dalagyadaas waxaa lagu koray aqalka dhirta lagu koriyo, laga bilaabo beeridda, kaas oo la sameeyo dhammaadka Abriil.
Taariikhaha abuurka ah ee geedo ee dalagyada hore iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa lagu xisaabiyaa hab sidan ah oo loo qaato waqti marka ciidda aqalka dhirta lagu koriyo ay ku filan tahay geedo.
Bannaanka khudradda cagaaran wuxuu ku dhufanayaa goglan yar-yar oo geedo ah oo daboolaya qabowga.
Geedo koray ee lagu koriyo ama mini-aqalka dhirta lagu koriyo xoog lehqaboojiyey. Laga soo bilaabo nooc ka mid ah seedling waxaa jira fursad ah si aad u hesho goosashada hodan ah ee khudaarta.
Haddii "sariir diiran" lagu sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa suurtogal ah in lagu beero isla markiiba geedka aqalka dhirta lagu dhejiyo iyo dhirta dhirta ku jirta marxaladda mid ama laba caleemo run ah. Sidaa darteed geedka geedo furan ama koriyo.
Warshadaha casriga ahi waxay soo saartaa koriyo badan oo kala duwan iyo qaabab kala duwan. Kuwa ugu caansan ee ugu guulaha badan, sida ku cad dib u eegista macaamiilka, waa noocyada soo socda:
"Palram Sun Tunnel". Qalabka aqalka dhirta yar oo leh daboolka polycarbonate. Waxaa loo qaabeeyey in la soo dego. Miisaanka oo ka yar hal kiilo. Waxay leedahay laba godood ee hawo-qaadashada. Isku-gudbinta iftiinka ah. Waxaa lagu hagaajiyay afar biin oo lagu soo saaro kitiga. Buulkaan aqalka dhirta ah uma baahna kulamo dheeraad ah, wuxuu si buuxda u diyaarsan yahay isticmaalka.
"Innovator Mini". Saldhigga waa qoryo adag oo gaaban 20 mm dhexroor. Dhererka - 80 - 100 cm Waxa lagu aasaasay dhulka oo leh afar dufan ah-xarig. Waxay ku qalabaysan tahay dabool leh fur furan, taas oo aad ugu sahlan daryeellada dhirta waxayna hubisaa in ay ku badan tahay iftiimintooda ugu sarreeya maalmaha diiran. Si fudud loo dhisi karo.
"PDM -7". Qalabka-aqalka dhirta lagu kori karo ee beerta beerta. Waxay leedahay 7 qaybood oo ah qaabka caagga ee caagga ah. Dabbaalku waa laba-nooc: polycarbonate ama filim. Dhamaan tuubooyinka cagaaran waxay ku xiran yihiin gacanta, iyada oo aan loo isticmaalin qalab. Kulanka, waxaa la bixiyaa shaag iyo xirmo isdabajoog ah.
"Caajis". Fanka arc, dhererka 70-80 cm Dajinta - daboolida magaca caanaha "Agrotex", cufnaanta 35g / m2, oo leh difaac gaar ah oo ka yimaada raajada ultraviolet.
"Qorshaha - beerta". Qolka aqalka dhirta yar yar ee balakoonka. Waxaa jira ikhtiyaaro leh laba iyo saddex raxan. Saldhig waxaa laga sameeyey bir ah caag ah. Xirmada waxaa ku jira kiis caag ah oo leh jajab.
Isticmaalidda aqalka dhirta lagu koriyo ee geedo - suurtogalnimada helitaanka miraha hore ee khudradda goor dhow. Dooro ikhtiyaarka adiga kugu haboon marka la eego sicirka iyo qiyaasta, waxaadna heli doontaa fursad aad ku koro geedo khudradeed oo xoog leh, dhadhan leh.
Noocyada caanka ah:
Palram qoryaha cadceeda
Geedi socodka beerta